Muxuu Xildhibaan Cumar Finish ka yiri DOORASHADA 2016-ka?..!! - Caasimada Online
Home Warar Muxuu Xildhibaan Cumar Finish ka yiri DOORASHADA 2016-ka?..!!
Muxuu Xildhibaan Cumar Finish ka yiri DOORASHADA 2016-ka?..!!
Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Cumar Maxamuud Maxamed “Cumar Finish” oo kamid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa quus kasii muujiyay in doorashada sanadkaan ay ku dhacdaa waqtigii loo qorsheeyay.
Xildhibaanka ayaa rajada ugu xun muujiyay kadib markii sida uu sheegay la fulin waayay jadwalkii loogu talo galay doorashada sanadkaan ka dhaceysa dalka Soomaaliya, wuxuuna sheegay in ka niyad jabeen doorashada sanadkaan dhaci laheyd.
Xildhibaanka Wuxuu sheegay in bisha lagu balamay doorashada ay soo dhawaatay, walina aysan muuqan wax dhaqdhaqaaq ah oo ku aadan doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyo dhismaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
“Runtii markaan fiirinno sida ay hadda wax u socdaan ee gaabiska ah, iyo watqigii oo hoosta naga soo galay ilama ahan aragti ahaan in hadda doorasho laga gaarsiin karo August iyo September laakiin kama hordhaceyno ee waxaan ka war sugeynaa guddiga loo xilsaaray”ayuu yiri Xildhibaanka.
Xildhibaanka wuxuu sheegay ineu jiraan caqabado badan oo horjeesadaya iney baaqat o doorashada Sanadkaan, wuxuuna midda ugu horeysa ku sheegay iney tahay in meel ano la’aan ah aysan doorasho ka dhici karin.